KOMBIYUUTARADA "REMIL 550KD": DIB-U-EEGIS, SHARAXAAD KU SAABSAN ASTAAMAHA IYO TILMAAMAHA ISTICMAALKA - KUFSI
Kombuyuutarada "Remil 550TsD" oo muddo dheer si xoog ah ugu guuleystay suuqa suuqiisa. Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa in aad isku mar noqotid tiro badan oo ah ukumaha shimbiraha. Thanks to hawlgalka lagu kalsoonaan karo ee qalabka lagu ilaalinayo cimilada gudaha, Remil 550CD waxay keenaysaa qalab ilaa 95% oo ah qiyaasta bilowga ee loogu talagalay. Qodobkan waxaanu ku baran doonaa qaabdhismeedka gudaha iyo astaamaha buun-socodka, iyo sidoo kale tixgelinta beeraha ay hawl-qabadka ugu fiican ku habboon tahay.
Qalabkan waxaa loogu talagalay in lagu soo saaro ukunta shimbiraha. Ramil 550TsD, digaag, duck, goose, turkey, digaagduur, iyo ukunta qajaarka ah ayaa laga yaabaa in "la daboolo".
Baro sida loo doorto aqbalida saxda ah ee gurigaaga.
Qalabkan waxaa soo saaray shirkadda Ruush Remil oo ka timid magaalada Ryazan. Shirkadda ayaa bilaabay kulubkii ugu horeeyay ee iibinta sanadka 1999-kii, tan iyo markaasna qalab ayaa la baddalay dhowr jeer. Waqtigan xaadirka ah, shirkadu waxay soo saartaa dhowr nooc oo baahida joogtada ah u leh iibsadaha iyo in ay naftooda ku xaqiijiyaan suuqa.
Qalabku wuxuu u egyahay sidii wasiir weyn oo laba jibbaaran, qayb kasta oo loogu talagalay siyaabo kala duwan oo loo xaddidayo.
Waa muhiim! Qalabkani waxaa loogu talagalay shaqada joogtada ah ee taranka shimbiraha yar-yar, waxa uu cunaa qadar badan oo koronto ah, laakiin wuxuu shaqeyn karaa wakhti dheer iyada oo aan kala go 'lahayn. Kumbuyuutarku waa qaali in uu shaqeeyo, laakiin kharash badan oo ku filan oo loogu talagalay beeraha dhexdhexaadka ah iyo kuwo waaweyn.
Qalabka wuxuu leeyahay sifooyinka soo socda:
miisaanka yar-yar - 40 kg;
xakamaynta kiiska - 131 cm (dhererka) * 84 cm (ballac) * 44 cm (qoto dheeraynta);
tirada saxda ee qolka hoose - 5 gogo ';
tirada saxda ah ee aqalka sare - 3 qaybood;
Awoodda ugu badan - 250 watts;
korontada - 220 watts (50 Hz);
waxaa jira gawaarida gawaarida gawaarida leh + farsameynta farsamaynta ee shaqadan;
qoyaanka hawadu wuxuu u dhexeeyaa 10% ilaa 100%;
heerkulka hawadu wuxuu u dhexeeyaa +20 ° C ilaa +40 ° C;
iyadoo la siiyay damaanado warshad saddex sano ah.
Baro sifooyinka isweydaarsiyada "Titan", "Stimulus-1000", "Laying", "Laying Perfect", "Cinderella", "Blitz".
Horumarinta ayaa leh:
digaag, qiyaas dhexdhexaad ah (54-62 g) - 400 gogo '(aqalka hoose) iyo 150 gogo' (xagga sare);
goose, miisaanka caadiga ah 140 g - 150 gogo '(qaybta hoose) iyo 72 gogo' (sare);
turkey, celcelis culus 91 g - 190 gogo '(qaybta hoose) iyo 90 gogo' (sare);
ducks, miisaanka caadiga ah illaa 75 g - 230 gogo '(hoose hoose) iyo 114 gogo' (qaybta sare);
ukunta miisaanka (miisaanka celceliska 31 g) - 560 gogo '(hoose hoose) iyo 432 gogo' (aqalka sare);
digaagduur, ukunta ukunta (miisaanka 12 g) - 1050 gogo '(qaybta hoose) iyo 372 gogo' (xagga sare);
bakeeriga, hilibka hilibka (miisaanka 15 g) - 900 boog (qolka hoose) iyo 372 gogo '(midka sare).
Ma taqaanaa? Digaagga digaaga waxaa ka jira qulqulatooyin adag - dabocase, laba ama saddex "haweenka ugu muhiimsan" iyo digaag caadiga ah. Haddii hanti-darradu burburo sababtoo ah tirtirista shakhsiyaadka, dagaalka iyo colaadaha waxay ka bilaabmaan bulshada digaaga ilaa inta booska banaan yahay uu ku jiro guusha.
"Remil 550TsD" wuxuu ku shaqeeyaa laba qaybood. Darbiyadaha qashin-qubka ayaa ka sameysan sanduuqyada sandwich, taas oo ka caawisa in ay diirimaaddo. Lakabka ugu sarreeya ee sandwich sandwalladu waa bir fiican oo bir ah. Gudaha kiiska ayaa la jarjaray balaastig wanaagsan.
Thanks to qalabkan, qalabku waa sahlan yahay nadiifinta iyo jeermiska. Laba waaxood oo hatchery ah ayaa sameeya geeddi-socodka ah ee shimbiraha dhalinta yar oo fudud.
Meelo ballaaran, waxaad ku dhejin kartaa ukumo aan ku jirin mugga wadar ahaan, laakiin waa kooxo sida ay u helaan. Kaamiradani waxay siisaa gawaarida gawaarida ah ee ukunta, iyo sidoo kale qalab farsamo oo loogu talagalay daroogada (loo isticmaalo kiisaska xaaladaha degdegga ah).
Qaybta labaad (yaryar) ayaa loo adeegsadaa isbitaalka dhalmada ee loogu talagalay chicks. Meelaha wax lagu duubo looma beddelin, laakiin waxay bixisaa heerkulka hawada ee ugu fiicnaanta iyo qoyaanka qoryaha.
Kamarad waliba waxay leedahay shakhsi gaar ah oo qoyaanka hawada iyo heerkulka.
Ukumaha la kululeeyo waxaa laga ilaaliyaa kuleylka iyadoo la adeegsanayo qalliinka saxda ah.
Qalabkan waxaa lagu xakumay qalab elektaroonik ah. Kobcinta ayaa ku shaqeyneysa sida ay u kala horeeyaan, taas oo tixgelinaysa dhammaan hababka isugeynta suurtagalka ah (noocyada shimbiraha kala duwan).
Waxa kale oo suurtagal ah in la isku hagaajiyo iyadoo la adeegsanaayo badhamada habka loo isticmaalo isticmaalka (heerkulka hawada, qoyaanka hawada, xilliyada kala duwan ee wareegga ukunta). Furaha furaha ah ee lagu hagaajinayo xogta waxay ku yaalaan dhinaca derbiga ee kiiska. Qalabka cusub ee qalabkan ayaa sidoo kale lagu soo bandhigaa qalabka elektarooniga ah.
Daaqad aragti ah ayaa u ogolaanaya beeralayda inay aragto kormeerka geedi-socodka.
Waa mid aad u muhiim ah in hawl kasta oo muhiim ah ee naqshadeynta la duubo. Halkii qalab jaban (meter heerkulka hawada, qoyaanka), waxaa suurtogal ah in la isku xiro dukaanku inuu shaqeeyo.
Batter dheeraad ah ayaa lagu bixiyaa masraxa, kaas oo lagu xiri karo haddii ay dhacdo koronto la'aan.
Sidoo kale, "mashiinka elektarooniga" ee qalabka ayaa laga ilaaliyaa koronto koronto iyadoo la adeegsanayo gawaarida tamarta ee tamarta ah. Qalabkani ma ogolaanayo in khubaradu jabo.
Ma taqaanaa? Dhibaato waqti dheer ah oo aqoonyahanno ah oo ku saabsan hormarka digaaga iyo ukunta ayaa loo xalliyaa. Bulshada sayniska waxay u timid inay aaminto in digaag casriga ahi uu ka soo baxay ukun kaas oo mar hore la dhigay dinosaur pterodactyl. Kaliya badalasho dheer oo dherer ah dhowr mitir ayaa keentay muuqaal digaag casri ah.
Waa maxay kulubka wanaagsan "Remil 550TsD":
Qalabka wuxuu leeyahay laba qeybood oo loo adeegsado: sare iyo hoose. Qeybta hoose (ballaadhan), ukunta dhirta si toos ah ayaa loo soo jeestay, iyo qaybta sare (yar), qaboojintu waxay dhacdaa iyada oo aan loo baahnayn.
Qayb ka mid ah ukunta la dhigo qaybta hoose waxaa lagu daboolaa foorar ilaa 3 ama 4 maalmood ah ilaa ay ka soo galaan tuubada. Taas ka dib, ukumaha oo dhan ka hooseeya qaybta hoose waxaa loo wareejiyaa qaybta sare, kaas oo u adeega sida waaxda ah ee loogu talagalay. Isla markiiba ka dib markii la sii daayo, ukunta cusub ayaa la dhigayaa qaybta hoose ee maskaxda, taas oo ah, waxaa suurtogal ah in qalabka aan joogsi lahayn ee qalabka.
Aad ugu fiicani waa in qaybta koowaad iyo labaad ee kiniisada Waad hagaajin kartaa heerkulka iyo qoyaanka. Tani waxay gacan ka geysataa xulashada habka ugu wanaagsan ee xaddidaadda oo saameyn ku yeelan doonta boqolleyda hatchability ee ukunta. Buugta isticmaalka waxay muujineysaa miis ay ku jiraan habka dib-u-kicinta ee noocyada kala duwan ee shimbiraha.
Qeybaha kala duwan ee qaboojinta iyo hatchability waa arrin u ah xaqiiqda ah in weyn kamaradda hoose ayaa had iyo jeer nadiif ah. Digaagga ayaa dillaacaya qaybta sare, qayb yar, waxaana ku haray dhammaan qashinka ka dib marka la isku xoqo (fluff, xabuto, borooti la qalajiyey, qolof). Way fududahay in la dhaqo qayb yar oo ka mida sidii loo fulin lahaa nadiifinta guud ee qalabka oo dhan.
Xeerarka qoyaanka hawadu waxay dhacdaa iyada oo aan kululeyn koronto, taas macnaheedu waa, haddii uu kaneecada ka baxo biyaha, ka dibna ukumo ma gubi doono. Qalabka wuxuu isticmaalaa biyaha caadiga ah ee tubada si uu u nadiifiyo hawada, iyo beerta digaaga ayaa u baahneyn in ay biyo qoyaan.
Qalabka oo dhan, oo ay joogtada joogtada ah u sii dari karaan hawada kuleylaha (mashiinnada, taageerayaasha), waxay ku yaalaan meel ka baxsan qolalka leh ukunta. Naqshadeynta aad ayuu u fekeraa, qalabyada dheeraadka ah waxay ku jiraan qaybaha dhinaca, oo leh qalab gaar ah.
Dayactirka ama beddelida qaybaha waa la sameyn karaa iyadoon furin kuleylaha. (gudaha albaabbada) iyo iyada oo aaney ku dhicin dulqaadka ukumaha.
Birta daba joogta ah, oo laga helo saldhigyada shabakada, ayaa lagu daboolaa galvanization iyo weliba rinjiyeyn. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad dhaqdo oo aad jeermiska qalabka siisid dhammaan noocyada jeermiska. Sidoo kale, baayacmushtaradu waxay u muuqdaan xaqiiqda ah in aysan jirin unugyo ka yar ukunta. Waxay ku habboon tahay in lagu kululeeyo baakidhada ukumaha shimbiraha, marka laga reebo dhagxaan. Saldhigyada ma beddelaan qaabka ayadoo saameyn ku leh heerkulka kulul ama qabow.
Firdhin iyo guryo lagu kalsoonaan karo fududahay nadiifinta iyo jeermiska.
Qalabka muddo laba ama saddex saacadood ah wuxuu hayaa heerkulka la dhigay xitaa marka uu jiro koronto la'aan, tan iyo markii jirkiisu ka samaysan yahay sanduuqyada kululaynta kuleylka.
Ukumaha ukunta loogu talagalay in la isugeeyo waa si joogto ah loo qalajiyo, taageerayaasha la dhisay ayaa mas'uul ka ah tan.
Qalabka ayaa la xisaabiyaa si ay u qabtaan tiro badan oo ah chicks waqti, waxaa aad u faa'iido leh beeraha ama shirkadaha yaryar ee iibiya da 'yarta.
Ma taqaanaa? Ukumaha digaaga oo leh laba xabbo oo marnaba ma digaagin digaagga. Inta badan, ukunta badani waxay noqonaysaa mid nadiif ah.
Qalabka ugu weyn ee qalabkan waa qiimaha ugu sareeya.
Isticmaal awood aad u sareeya.
Qaar ka mid ah macaamiisha ayaan ku faraxsaneyn qadarka noocan ah, kumbuyuutarku ma fududa in laga guuro meel ama meel u guurto (guurto) meel kale.
Si aad ugu guulaysato kuleelka iyo aad u hesho qashinka waaweyn ee chicks, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u raacdo xeerarka isugeynta iyo heerkulka (kala duwan ee noocyada shimbiraha kasta).
Baro sida loo helo digaagga digaagga, ducks, turkiga, berriga, shimbiraha guinea, shinbiraha, kaadhadhka isticmaalka khubarada.
Ka hor inta aan la saarin qalabka ukunta waa in la nadiifiyaa loona nadiifiyaa. Nidaamkan waxaa looga baahan yahay labadaba cusub oo kaliya oo lagu dhammeeyay qalabkii hore.
Ka dib marka la shaqeynayo nadaafadda, qalabka waa la tirtiraa qalalan.
Biyaha waxaa lagu shubay maskaxda si ay u qoyaan hawada (weelal gaar ah).
Qalabku wuxuu isku rogaa shabakadda korontada, iyo ka dib marka la rakibo qolka heerkulka la dejiyay ee kuleylaha ayaa diyaar u ah inuu helo ukun.
Saxanka (ama trays) ayaa ka buuxsamaya ukunta, ka dib marka ay ka soo baxaan gawaarida oo dhan ayaa lagu dhejiyaa qolalka hoose ee qaboojinta.
Ka dib marka la geliyo baakidhka ukunta ee kiniisada, albaabkii golaha wasiirku waxay xidhaan, lakulanka ayaa isla markiiba bilaabay "kululaynta" chicks.
Ma taqaanaa? Dadka dhexdiisa, hadalka "Nasiib sida digaag" waxay la mid tahay maskaxda ku jirta. Laakiin tani maaha mid sax ah, digaagga waa shimbir qurux badan, waxay si fudud u xasuustaan ​​wadada guriga, meesha iyo waqtiga quudinta. Sidoo kale sida folklor-ka ee Slavic, qaylo-dhiska habeenkii waa caqabad ku filan oo loogu talagalay dadka wanaagsan oo ka soo jeeda jinni jinni.
Haddii saxaaraddu aysan si buuxda u buuxsamin, xaddidaadyada ayaa lagu rakibay meel u dhow safka ugu dambeeya. Tani waxaa la sameeyaa si markaa loo mariyo gawaarida gawaarida ah ee ukunta oo aan wax dhaawac ah soo gaarin.
Tilmaame-barahan wuxuu ku siinayaa suurtogalnimada in si tartiib tartiib ah loogu buuxiyo baakidhka ukunta qaybta hoose.
Baro sida loo nuugo loona dhaqo ukunta ka hor inta aanad guriga ku dhejinin, sida loo dhigo ukumaha ku jira maskaxda.
Diyaargarow horudhac iyo ukumo ah oo ku yaalla "incilator Remil 550CD": video
Inta lagu jiro xilliga kuleelka, ukunta waxaa lagu qallajiyaa habka qoyaanka hawada iyo qaboojiyaha heerkulka la rabo iyadoo la adeegsanayo taageerayaasha.
Dhibbanaha digaaga marwalba wuxuu awood u leeyahay in uu xakameeyo waxa ka dhacaya gudaha qaboojiyaha, adigoo eegaya daaqada daawashada.
Dhamaadka dhammaadka wareegga (3-4 maalmood), godka hoose ee qolka hoose wuxuu u guuraa qollada sare (kan gacanta), halkaas oo qandhadu socoto, laakiin iyada oo aan laysku celin.
Maalinta ugu dambeysa ee kuleelka, beerta digaaga waa inay ahaato meel u dhow qalabka iyo fiiri daaqada sare ee kormeerida wareega saacad kasta. Haddii chicks ay ka muuqato "qolka qashinka", waa la saarayaa oo waxaa la geliyaa sanduuq khaas ah oo leh hoose oo daboolan iyo nalalka kuleylka ah oo la hakiyo.
Mararka qaarkood qolofka adagi uma oggola inuu jebin karo. Xaaladdan oo kale, beeraleyda digaaga ayaa ku caawin kara iyada oo gacan ka geysan karta jebinta xayiraadda iyo ka saarida cunugga shimbirta ah.
Waa muhiim! Inta lagu jiro shanta sano iyo toddoba maalmood ee ugu horreeya noloshiisa, jiirarka ka soo kobcinta, oo aan lahayn hooyo daryeel leh, waxay u baahan tahay in la kululeeyo. Beeraleyda digaaga ayaa ku siin kara kuleylkan adigoo xiraya nalalka korontada si toos ah uga sareysa chicks. Haddii tan aan la sameyn, iyada oo aan lahayn kuleyliye dheeraad ah, inta ugu badan ee cidla ah ayaa dhiman doona.
Sidee bay ducklings ugu qulqulayaan incubator Remil 550CD: video
Qiimaha kuleylahan ayaa aad u sarreeya. Sanadka 2018, Remil 550TsD waxaa laga iibsan karaa:
Gudaha Ruushka ee 60 000-72 000 roon ama 1050-1260 doolar.
In Ukraine, kiniisadaan waxaa kaliya oo lagu iibsan karaa boos celin iyo ka dib markii la gorgortamayo qiimaha iibiyaha. Alaab iibiyuhu waa inuu tixgeliyaa in qiimaha, marka lagu daro qarashka, ay ku jiri doonaan marxaladda ganacsiga, khidmada canshuurta iyo kharashka gaadiidka qalab aad u habboon oo ka socda dal kale.
Waxaan la yaabanahay haddii aad sameyn kartid ukumo-gacmeed oo gacmahaaga ah.
Iyadoo la tixgelinayo dhammaan qodobada kore, gabagabadu waa cad: Kuleylaha waa mid aad u fiican oo la isku halleyn karo.
Maadaama ay qalabku aad u qaali yihiin oo ay isticmaalaan koronto badan - qalabku wuxuu ku habboon yahay isticmaalka beeraha ballaaran oo dhexdhexaad ah kuwaas oo quudiya shimbiraha si loogu iibiyo ama lagu iibiyo digaag yar.
Habkani kuma haboon yahay isticmaalka guriga, waa qiimo aad u qiimo badan oo lagu isticmaalo kulubka qiimaha jaban ee mobile-ka ee laga sameeyey xumbo fudud (Ryabushka, Layer, Kvochka, Teplusha) guriga dhexdiisa.
Ma taqaanaa? Xayawaan dhallinyaro ah oo wanaagsan oo 12 bilood ah ayaa qaadan doona 250 ilaa 300 ukumood.
"Remil 550TsD" waa mid maskax ku filan oo ka mid ah ururada sayniska iyo waxsoosaarka ee Ryazan, iyada oo ay ugu wacan tahay naqshad guul leh oo la isku halleyn karo oo lagu guuleystay macaamilka. Laakiin weli, ka hor intaanan helin qaabkan, iibsadaha waa inuu bartaa dabeecadaha farsamada iyo soosaarida, iyo sidoo kale inuu miisaamo dhammaan dhinacyada wanaagsan iyo kuwa xunba.
Kombiyuutarada "Remil 550TsD": faallooyinka
Salaan Waxaa laga yaabaa in ay jiraan hiilo iyo Ramilov ka fiican, laakiin waxay ahayd 550 oo i badbaadisay, sannadkii hore, markaan cusub, si aad u xayeysiis ah hal dukaan online ah, ayaa si fudud loo joojiyay soo saarista, sababtoo ah farsamoyaqaannada Kirovskka ayaa la sameeyay qoryo. Dabcan, way ka baqaysaa in la dhaqo, lakabana waa in lagu qabtaa meelo adag oo la gaari karo, laakiin waan jeclahay. Waxa ugu muhiimsan ee astaamaha ah iyo heerarka huurka. Aniga waxaan ahay da ', waa in isbedelka la isku bedelo, laakiin waxaan bartay si aan u fahmo iyaga, taas oo macnaheedu yahay in aan weli shaqeynayo, ka dibna waxaan amar ku bixin lahaa kuwa cusub. Waxaan qof walba ugu martiqaaday beerta - //fazanhutor.rf dhammaan dareeraha iyo budhcad-badeeda iyo kuwa xashiishka ah. Guul!
Ma aanan dooneynin inaan kaa xanaajiyo, waan ka xumahay! Sidaa daraadeed waxay igu dhacday ixtiraamayaashan, waxaa laga yaabaa inaad ka duwanaan doonto. Taasina waa sida aan rabo inaan u gudbiyo - in kulubku yahay dheecaan, kalsooni iyo dib u noqosho yaraani sababtuna tahay qaababka naqshadeynta. Waa wax aan suurtagal ahayn in lagu gaaro tayada soo noqnoqonaysa, oo ku tiirsan waxyaabo leh khayraad shaqo oo yaryar oo yar. Habka isbedelku wuxuu ahaa mid aad u dhib badan, waxaa jira wax badan oo "haddi iyo si lama filaan ah" ah in natiijadu noqoto mid aan la hurin.
Si kastaba ha ahaatee, wax soo saarka wanaagsan ayaa laga heli karaa, natiijadayada ugu fiican waa 97% broiler, ugu xun 75% waa marka kuleylaha aan la qabsan karin heerkulka marka qalabka qaboojiyaha la qaboojiyo xagaaga. Heerkulka qolka wuxuu ahaa +24 (miisaan +35) iyo kumbuyuutarku ma gaari karayn heerkulka la rabay, isku dheelitirka ... (laakiin isbeddelkan waxaa lagu sharaxay qaababka barnaamijka ee cutubka xakameynta processor) Heerkulka heerkulka sare ee sare iyo hoose wuxuu ahaa 1.5 darajo.
Haddii aan arko sida loo sameeyey gudaha, ma aanan iibsan laheyn. Waqtigaas ma jirin wax war ah, cidna ma muujin karto sawirka qaababka, iyo maamulayaasha --- basaasyada weli waa kuwa ...
Daroogada Veterinary "Ligfol": tilmaamaha, qiyaasta
Yaanyo qurux badan oo dhadhan fiican leh - yaanyo "Orange ragga 117"
Maxay ka caawin doonaan orodka fytosporin iyo sida loo isticmaalo si sax ah?
Abuuritaanka Ural: sharaxaad iyo sawir noocyo caan ah oo ah basbaas macaan
Mashruucyada koritaanka beerta
Xeerarka daryeelka guriga ee Tetrastigma Voyane (canab gudaha ah)